Francisco Nadador: inotaura nezve chiitiko chake mukuongorora kwehunyanzvi | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi tinobvunzurudza chete yeLxA Francisco Nadador, nyanzvi dzemakomputa forensics, anofarira kuchengetedzwa kwekombuta, kubiridzira uye kuyedzwa kwekupinda. Francisco akapedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeAlcalá de Henares uye izvozvi anotungamira Kukanganiswa, yakatsaurirwa kumakirasi ekudzidzisa pamisoro yekuchengetedza uye inopa masevhisi ane chekuita neiyi musoro wemakambani.
Akapedzisa Master (Open University yeCatalonia) pakuchengetedzwa kwemakomputa anotungamira mumisoro miviri, Forensic Analysis uye Network Security. Neichi chikonzero, akagashira Honor Roll uye akazove nhengo yeNational Association yeComputer Judicial Appraisers uye Nyanzvi. Uye sezvaachatsanangura kwatiri, Vakamupa Muchinjikwa Menduru yeInvestigative Merit neWhite Badge yebasa rake rehunyanzvi uye kutsvagisa. Mubairo zvakare wakakundwa naChema Alonso, Angelucho, Josep Albors (CEO weESET Spain), nezvimwe.
Linux Vanopindwa muropa: Ndokumbirawo mutsanangurire vaverengi vedu kuti chii chinonzi forensic analysis.
Francis Swimmer: Kwandiri isainzi inoedza kupa mhinduro kune zvakaitika mushure mekuchengetedzwa kwekombuta chiitiko chedigital, mhinduro dzerudzi Chii chaitika? Zvakaitika rini? Zvakaitika sei? Uye chii kana ndiani akakonzera?
LxW: Kubva pachinzvimbo chako uye neruzivo, ita dzakakomba cybercrimes dzinoitika nezvakawanda
kuwanda kuSpain sekune dzimwe nyika?
FN: Zvakanaka, maererano nemishumo yakaburitswa neEU uye iri munharaunda yeruzhinji, Spain iri pazasi penyika dzinovandudza, pamwe nedzimwe nyika dziri munzvimbo yekumaodzanyemba, izvo zvidzidzo zvinopa kuenzanisa kwekutsvagisa nekuvandudza mashandiro eiyo nyika dziri chikamu cheEU. Izvi zvinokonzeresa kuti huwandu hwezviitiko zvekuchengetedza pano zvive zvakakosha uye yavo typology dzakasiyana.
Makambani anomhanyisa njodzi zuva nezuva, asi zvichipesana nezvingaratidzika, ndiko kuti, kuti vangangouya kubva mukuratidzwa kwavo kunetiweki, idzo njodzi idzo dzinowanzo kukonzerwa nehunhu husina kusimba muketani, mushandisi. Nguva dzese kutsamira kwemidziyo pamwe nenhamba yeaya anobatwa ari makuru, izvo zvinokonzeresa kutyora kwekuchengetedza, chidzidzo chandakaverenga nguva pfupi yadarika chakataura kuti zvinopfuura makumi mashanu muzana ezviitiko zvekuchengetedza zvakakonzerwa nevanhu, vashandi, vekare vashandi, nezvimwewo, makambani anodhura zviuru nezviuru zvema euro, mumaonero angu pane mhinduro imwe chete yedambudziko iri, kudzidziswa uye kuziva uye kwakanyanya chitupa muIO50.
Kana zviri zveCybercrimes, kunyorera kwakadai seWhatsApp, ramsonware (ichangobva kunzi cryptolocker), hongu, iyo chaiyo mari bitcoin, kushomeka kwemhando dzakasiyana pasina kurongedza zvakanaka, kubiridzira kwekubiridzira paInternet, iko "kusadzora" mashandisiro enhau, nezvimwe, ndeavo vakatora nzvimbo dzekutanga mumatanho ematsotsi eterevhizheni.
Mhinduro ndeyekuti "HUNGU", muSpain mhosva dzekukanganisa mhosva dzakakosha sedzimwe nyika dzenhengo dzeEU, asi kazhinji.
LxW: Wakatambira Matriculation yeRukudzo kune rako rekupedzisira chirongwa chaTenzi chawakaita. Chii chimwe,
wawana mubairo… Ndapota tiudze nyaya yese.
FN: Zvakanaka, ini handifarire mibairo kana kubvumwa, chokwadi ndechekuti, chirevo changu kushingairira, basa, kuzvipira uye kuomerera, shingirira zvikuru kuzadzisa zvinangwa zvawakazvisarudzira.
Ndakaita Master nekuti inyaya yandinofarira, ndakapedza kubudirira uye kubva ipapo kusvika zvino ndazvipira kwazviri nehunyanzvi. Ini ndinoda kuferefetwa kwemakomputa, ini ndinofarira kutsvaga uye kuwana humbowo uye ini ndinoedza kuzviita kubva kune hunotyisa tsika. Mubairo, hapana chakakosha, mumwe munhu akafunga kuti basa raFinal Master rakafanirwa nazvo, ndizvozvo, handizvipe kukosha. Nhasi ndiri kunyanya kudada nedzidzo yandakaburitsa kuti izadzikiswe online pamakomputa forensics uye iyo yave muchirongwa chechipiri.
LxW: Ndeapi magadziriso eGNU / Linux aunoshandisa muzuva rako zuva nezuva? Ini ndinofungidzira Kali Linux, DEFT,
Kudzokera shure uye Santoku? Parrot OS?
FN: Zvakanaka iwe wakatumidza mashoma ehe. KwePentesting Kali uye Backtrack, Santoku yeForensic ongororo paMobile uye Deft kana Helix, yekuongorora forensic paPC (pakati pevamwe), kunyangwe iwo ari masisitimu, ese iwo ane maturusi ekuita mamwe mabasa ane chekuita ne pentesting uye ongororo yecomputer forensic, Asi kune mamwe maturusi andinoda uye ane Linux vhezheni senge autopsy, volatility, zvishandiso senge Chokutanga, testdisk, Photorec, muchikamu chekutaurirana, wireshark, kuunganidza ruzivo nessus, nmap, kushandisa metasploit munzira ine otomatiki uye Ubuntu rarama pachako cd, iyo inobvumidza iwe kutanga muchina uyezve, semuenzaniso, kutsvaga malware, kudzoreredza mafaera, nezvimwe.
LxW: Ndeapi masosi ekuvhura sosi aunofarira?
FN: Zvakanaka ndinofunga ndanga ndiri pamberi pemhinduro kumubvunzo uyu, asi ndichaongorora chimwe chinhu. Kuvandudza basa rangu ini ndinonyanya kushandisa open source maturusi, iwo anobatsira uye anotendera iwe kuti uite zvinhu zvakafanana nezve izvo zvinobhadharirwa rezenisi rekushandisa, saka, mumaonero angu, basa rinogona kuitwa zvakakwana nematurusi aya.
Pano mafomu eLinux anotora jackpot, ndinoreva, iwo anoshamisa. Linux ndiyo ipuratifomu yakanakisa yekutumirwa kwemashandisirwo ekuongorora nezve forensic, kune mamwe maturusi eiyi sisitimu yekushandisa pane yechero ipi uye zvimwe zvacho, zvakanaka, ruzhinji rwakasununguka, rwakasununguka uye Rwakavhurwa Sosi, rinovatendera kuve akashandurwa.
Kune rimwe divi, mamwe masisitimu anoshanda anogona kuongororwa pasina dambudziko kubva kuLinux.Chete chinokanganisa, pamwe, ndechekuti chakanyanya kuomarara mukushandisa nekugadzirisa, uyezve, sezvo vasiri vekutengesa, havana kuenderera kutsigira. Vangu vandinoda, ndakazvitaura kare, Deft, Autopsy, Volatility, uye zvimwezve.
LxW: Iwe unogona here kutiudza zvishoma nezve Iyo Sleuth Kit… Chii ichocho? Zvishandiso?
FN: Zvakanaka, ini ndanga ndambotaura neimwe nzira nezve maturusi aya mune dzakapfuura mapoinzi. Iyo nharaunda yekuongorora forensic komputa, mufananidzo wayo, "imbwa hound", mushe mushanduro yazvino imbwa ine kumeso kwekuve nehungwaru hwakaipisisa, chokwadi .
Icho chinonyanya kukosha chinongedzo mune iri boka rezvishandiso, autopsy.
Iwo masystem vhoriyamu maturusi anotendera kuongororwa kwemifananidzo yekomputa yekuongorora kubva kumapuratifomu akasiyana nenzira ye "NON-INTRUSIVE", uye ichi ndicho chakakosha kupiwa kukosha kwayo mune forensics.
Iyo ine mukana wekuti ishandiswe mune yekuraira tambo modhi, ipapo chishandiso chimwe nechimwe chinoitwa mune yakasarudzika terminal nharaunda kana futi, mune yakanyanya "hushamwari" nzira, graphical nharaunda inogona kushandiswa, iyo inobvumidza kuita kuferefeta mune nzira yakapusa.
LxW: Iwe unogona kuita zvakafanana ne LiveCD distro inonzi HELIX?
FN:Huye, ndeimwe yemaforamu ekuongorora kwecomputer, zvakare yakawanda nharaunda, ndiko kuti, inoongorora mifananidzo yehunyanzvi yeLinux, Windows uye Mac masisitimu, pamwe nemifananidzo ye RAM uye nezvimwe zvishandiso.
Zvichida maturusi ayo akasimba ndeaya Adept ekugadzirisa michina (kunyanya disks), Aff, chishandiso chekuongorora kwekuongorora kwakabatana nemetadata uyezve! Kunze kweizvi ine akawanda maturusi.
Iyo yepashure, iyo yehunyanzvi vhezheni inobhadharwa, kunyange iine zvakare yemahara vhezheni.
LxW: TCT (Iyo Coroner's Toolkit) chirongwa chakatsiviwa neThe Sleuth Kit.
ramba uchishandisa ipapo?
FN:TCT yaive yekutanga yematurikisi ekuongorora kwekuongorora, zvishandiso senge guva-gororo, lazarus kana findkey yakazviratidza uye pakuongorora kwekare masisitimu inoshanda zvakanyanya kupfuura akaitangira, zvakada kufanana nezvinoitika nekudzokera shure uye kali, Ndichiri kushandisa zvese zviri zviviri, semuenzaniso.
LxW: Guidance Software yakagadzira EnCase, yakabhadharwa uye yakavharwa. Zvakare haina kuwanikwa kune mamwe asiri-Windows anoshanda masystem. Izvo zvinonyatso gadzirira iyi mhando ye software nekuve mahara dzimwe nzira? Ini ndinofunga kuti zviripo zvese zvinodikanwa zvakafukidzwa nemahara uye emahara mapurojekiti, kana ini ndiri kukanganisa?
FN: Ini ndinofunga ndatopindura izvi, mumaonero angu ane mwero HERE, hazvibhadhare uye HONGU, zvese zvinodiwa kuti uitise komputa ongororo yakafukidzwa nemapurojekiti emahara uye emahara.
LxW: Tichinongedzera kumubvunzo uri pamusoro, ini ndinoona kuti EnCase ndeyeWindows uye nezvimwewo
zvishandiso senge FTK, Xways, yeongororo yekuongorora, asiwo mamwe maturusi ekupinda nekuchengeteka. Nei uchishandisa Windows yemisoro iyi?
FN: Ndingadai ndisingazive kupindura iwo mubvunzo zvine chokwadi, ini ndinoshandisa kanokwana 75% bvunzo dzandinoita maturusi akagadzirirwa mapuratifomu eLinux, kunyange ini ndichiziva kuti kune akawanda uye akawanda maturusi akagadzirirwa izvi zvinangwa pamapuratifomu eWindows, uye Ini zvakare ndinoziva kuti ini ndinovaisa pamuedzo uye dzimwe nguva ini ndinoishandisawo, hongu, sekureba sekunge iri emahara-ekushandisa mapurojekiti.
LxW: Uyu mubvunzo unogona kunge uri chinhu chinoshamisira, kuchidaidza chimwe chinhu. Asi iwe unofunga kuti kuendesa humbowo mumiyedzo, humbowo chete hunopihwa neyakavhurika sosi software hunofanirwa kuve hunoshanda kwete hwakavharwa? Rega nditsanangure, zvinogona kufunga zvakashata uye ndokuzotenda kuti ivo vakwanisa kugadzira software yepamutemo inopa data rakakanganisika neimwe nzira kuregerera mumwe munhu kana mamwe mapoka uye panenge pasina nzira yekuongorora kodhi yekodhi kuti uone izvo inoita kana isingaite iyo software. Icho chakamonyoroka zvishoma, asi ini ndinozvifungira iwe kuitira kuti iwe ugone kupa maonero ako, kuzvisimbisa kana kuti, nekusiyana, kujoina iyi pfungwa ...
FN: Kwete, ini handisi iye wekufunga, ini ndinoshandisa zvakanyanya zvemahara software zvishandiso uye mune dzakawanda zviitiko zvakavhurika, asi handifunge kuti chero munhu anogadzira maturusi anopa data rakakanganisa kuitira kuti asunungure chero munhu, kunyange chiri chokwadi kuti munguva pfupi yapfuura mamwe mapurogiramu akaonekwa kuti ivo nemaune vakapa data risiri iro, yaive mune imwe chikamu uye ini ndinofunga ndiko kusara kunosimbisa mutemo, chaizvo, handifunge kudaro, zviitiko, mumaonero angu, zvinoitwa zvine hunyanzvi uye, zvirinani mune iyi nyaya, zvakavakirwa pasainzi chete, humbowo hunorapwa kubva pakuona kwesainzi, zvakapusa, ndiwo maonero angu nekutenda kwangu.
LxW: Mazuva mashoma apfuura, Linus Torvalds akataura kuti chengetedzo yakazara haigoneke uye kuti vanogadzira havafanirwe kutariswa mune izvi uye vape pekutanga zvimwe zvinhu (kuvimbika, kuita, ...). Washintong Post akanhonga aya mazwi uye aivhundutsa kubvira Linus Torvalds "ndiye murume ane ramangwana reInternet mumaoko ake", nekuda kwehuwandu hwemaseva uye masevhisi masevhisi anoshanda nekutenda kune kernel yaakagadzira. Iwe unofungei maonero?
FN: Ini ndinobvumirana naye chose, chengetedzo izere haipo, kana iwe uchinyatsoda chengetedzo izere pane sevha, dzima kana kuibvisa kubva kunetiweki, uvige, asi zvirokwazvo, ipapo, haisisiri sevha, kutyisidzira kucha zvinogara zviripo, izvo zvatinofanira kuvhara ndezvekushomeka, izvo zvinodzivirirwa, asi chokwadika, dzinofanira kutanga dzawanikwa uye dzimwe nguva zvinotora nguva kuita tsvakiridzo iyi kana vamwe vanozviitira nekuda kwekusaziva.
Nekudaro, ini ndinotenda kuti tekinoroji isu tiri panzvimbo yepamusoro kwazvo yekuchengetedza, zvinhu zvave nani zvakanyanya, ikozvino iko kuziva kwemushandisi, sezvandakataura mumhinduro dzakapfuura, uye izvo zvichiri zvakasvibira.
LxW: Ini ndinofungidzira kuti ma cybercriminals ari kuita kuti zvinyanye kuoma nguva dzese (TOR, I2P, Freenet, steganography, encryption, Emergency Kuzviparadza kweLUKS, proxy, metadata kuchenesa, nezvimwewo). Unoita sei muzviitiko izvi kupa humbowo mudare? Pane zviitiko apo iwe usingakwanise?
FN: Zvakanaka, kana chiri chokwadi kuti zvinhu zviri kuwedzera kuomarara uye painewo nyaya dzandisina kukwanisa kuita, ndisina kuenda kumberi neakakurumbira cryptolocker, vatengi vandifonera vachikumbira rubatsiro rwangu uye hatina kukwanisa ita zvakawanda nezvazvo, Sezvinozivikanwa, iri rudzikunuro iyo, kutora mukana weinjiniya yemagariro, zvakare mushandisi ndiyo isina kusimba chinongedzo, inonyora zvirimo zvemadhiraivhi akaomarara uye iri kutungamira ese macomputer ekuchengetedza macomputer, masainzi mayuniti emutemo Kutevedzera, vanochengetedza suite vagadziri, uye muongorori wezve forensic, hatisi kukwanisa kugadzirisa dambudziko iri.
Kumubvunzo wekutanga, tinoita sei kuunza nyaya idzi kuti dzitongwe, saka tinoita sei nehumboo hwese, ndinoreva, nehunhu hwehunyanzvi, zvakare maturusi akaomesesa, ruzivo rwesainzi uye kuyedza kutsvaga mhinduro dzemibvunzo mune wekutanga Mubvunzo, wakakosha iyo redundancy yandakataura, ini handiwani mutsauko, zvinoitika ndezvekuti dzimwe nguva mhinduro idzi hadziwanikwe.
LxW: Ungakurudzira makambani kuchinjira kuLinux? Sei?
FN: Ini handingataure zvakawanda, ndinoreva, ndinofunga kuti kana ndine chimwe chinhu chisina rezinesi chinondipa iwo masevhisi akafanana nechinhu chinoda mari, nei uchichishandisa? Mumwe mubvunzo ndewekuti haundipe izvo zvakafanana services, asi, ndizvozvo kana zvikadaro. Linux ndeye inoshanda system iyo yakaberekwa kubva pakuona kweiyo network sevhisi uye inopa zvakafanana maficha kune mamwe mapuratifomu ari pamusika, ndicho chikonzero nei vazhinji vakaisarudza neplatifomu yavo, semuenzaniso, kupa webhu saiti. , ftp, nezvimwewo, ndinonyatsoishandisa uye kwete chete kushandisa forensic distros asiwo sevha munzvimbo yangu yekudzidzira, ndine Windows palaptop yangu nekuti rezinesi iri inosanganisirwa nechigadzirwa, kunyangwe saka ndinokanda zvakawanda Linux.
Mukupindura uyu mubvunzo, Linux haibhadhare, kune huwandu huri kuwedzera hwezvishandiso zvinomhanya papuratifomu iyi uye nekuwedzera uye makambani ekuvandudza ari kugadzira zvigadzirwa zveLinux. Kune rimwe divi, kunyangwe isiri yemahara malware, huwandu hwehutachiona hwakadzikira, izvi pamwe nekuchinjika uko ipuratifomu inokupa kuti uchinje segurovhosi kune zvaunoda, zvinopa, mumaonero angu, simba rakaringana Sarudzo yekutanga yekambani uye inonyanya kukosha pane zvese, munhu wese anogona kuongorora zvinoitwa ne software, tisingataure kuti chengetedzo ndeimwe yemasimba ayo.
LxW: Parizvino pane mhando yehondo yemakomputa umo hurumende dzinotorawo chikamu. Isu takaona malware senge Stuxnet, Nyeredzi, Duqu, nezvimwe, zvakagadzirwa nehurumende nekuda kwezvakanangana, pamwe nehutachiona firmware (semuenzaniso, Arduino mabhodhi ane yavo yakagadziridzwa firmware), "spy" laser maprinta, nezvimwe. Asi kunyangwe hazvo hardware inopukunyuka kubva pane izvi, machipisi akagadziridzwa akaonekwawo kuti, pamusoro pemabasa avakange vakagadzirirwa, anosanganisira mamwe mabasa akavanzika, nezvimwe. Isu takatoona mapurojekiti akapenga akadai seAirHopper (rudzi rweredhiyo wave keylogger), BitWhisper (kupisa kurwisa kuti utore ruzivo kubva kune akabatwa), malware inokwanisa kupararira nezwi, ... Ndiri kuwedzeredza here kana ndikati ivo havachisiri yakachengeteka kana makomputa akabviswa pane chero network?
FN: Sezvandatotaura, sisitimu yakachengetedzeka ndiyo yakavharwa uye vamwe vanoti yakavharirwa mutirongo, murume kana yadamburwa ndinofunga yakachengeteka zvakare, asi iwoyo hausi mubvunzo, ndinoreva, mumaonero angu mubvunzo hausi iwo huwandu hwekutyisidzira huripo, kune akawanda uye akawanda maturusi akabatana, zvinoreva huwandu hwakawanda hwekushomeka uye kurwisa kwemakomputa emhando dzakasiyana siyana, uchishandisa, sekutaura kwawakaita mumubvunzo, kutsemuka kwakasiyana nekurwisa mavekitori, asi ini handifunge kwete Tinofanirwa kutarisa nyaya pakubviswa kuti ive yakachengeteka, isu tinofanirwa kutarisa kuchengetedza masevhisi ese, zvishandiso, kutaurirana, nezvimwe, sezvandambotaura, kunyangwe chiri chokwadi kuti huwandu hwekutyisidzira hombe, hazvisi zvishoma zvechokwadi kuti huwandu hwechengetedzo matekiniki hausi pasi pehukuru, isu tinoshaya hunhu hwevanhu, kuziva uye kuchengetedzeka kudzidziswa, hapana chimwezve uye matambudziko edu, kunyange akabatana, achave mashoma.
LxW: Isu tinopedzisa nemaonero edu uye sehunyanzvi hwekuchengetedza hunokodzera masisitimu aya, iwe unogona zvakare kutipa dhata pane izvo zvakanyanya kunetsa kuwana uye kuwana mamwe maburi ekuchengetedza:
Nezvemubvunzo wemamirioni emadhora, ndeipi sisitimu yakachengeteka, mhinduro yakapihwa zvisati zvaitika, hapana 100% yakachengeteka yakabatana netiweki.
Windows haizive kodhi yayo, saka hapana munhu anoziva chaizvo zvainoita kana nemabatiro ainozviita, kunze kwevagadziri vechokwadi. Iyo sosi kodhi yeLinux inozivikanwa uye, sezvandambotaura, chengetedzo ndeimwe yemapoinzi akasimba, kupokana nayo ndeyekuti haina hushamwari uye kune akawanda ma distros .Mac OS, yakasimba pfungwa, yayo minimalism inodzokera mukugadzirwa, iyo yakanaka sisitimu yevatangi. Kune ese aya zvikonzero, mumaonero angu chakanyanya kunetsa kuwana iWindows, kunyangwe hazvo zvidzidzo zvazvino zvichiratidza kuti ndiyo ine hushoma hushoma, zvakanaka kunze kwebrowser yako. Semaonero angu hazvina musoro kutaura kuti iyi kana iyo sisitimu inoshanda zvakanyanya kana kushomeka, zvese zvinhu zvainokanganisa zvinofanirwa kutariswa, kusagadzikana, kuiswa kwakashandiswa, vashandisi vayo, nezvimwe. Kana zvese zviri pamusoro zvatariswa, ndinotenda kuti masisitimu anofanirwa kusimbiswa nemhando dzese dzekuchengetedza matanho, zvakawandisa uye zvinoshanda kune chero hurongwa, iko kusimbiswa kweizvozvo kunogona kupfupikiswa mune aya akakosha mapoinzi:
Kwidziridzo: Nguva dzose chengetedza iyi poindi muchirongwa uye zvese zvinoshandiswa zvinoshandisa network kusvika pari zvino.
Passwords inofanirwa kukwana, ndinoreva, iine mashoma masere mavara uye duramazwi hombe.
Perimeter chengetedzo: Yakanaka firewall uye IDS yaisazokuvadza.
Kusina kuvhurika madoko asingape inoshanda uye yakagadziridzwa sevhisi.
Gadzira makopi ekuchengetedza maererano nezvinodiwa nenyaya imwe neimwe uye chengeta munzvimbo dzakachengeteka.
Kana iwe uchishanda neyakavanzika dhata, encryption yakafanana.
Encryption yekutaurirana zvakare.
Kudzidziswa uye kuziva kwevashandisi.
Ndinovimba makafarira iyi hurukuro, isu ticharamba tichiita zvimwe. Tinotenda iwe kusiya kwako maonero uye makomendi...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Francisco Nadador anotiudza nezve zvaakaona munyika yeongororo yekuongorora
Zvakanaka, chinhu chakakosha. Mushandisi.
Iyo sisitimu inotarisawo zvakare. Mune esoteric yeWindows ndinotenda kuti ndiyo kiyi. Kusiyana neLinux, iyo inoda nguva. Izvi hazvidudzirwe zvachose, asi zvinopa Linux bhonasi.
Jose Rojas akadaro
Zvinofadza zvese zvakasimudzwa. Ndinoda kuziva zvishoma nezve Helix uye kubatsira kwayo
Pindura kuna Jose Rojas